သက်တန့်ချို: သင်ရော ရန်သူလိုချင်သလား မိတ်ဆွေလိုချင်သလား
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ လူနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေအဖြစ်နေကြတယ် ။ တစ်ဦးက လယ်သမားဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦးကတော့ မုဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ လယ်သမားဟာ သူနေတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ ဘဲတွေမွေးထားတယ် မုဆိုးကတော့ သူ့ခြံဝန်းထဲမှာ အမဲလိုက်ခွေးတွေမွေးမြူထားခဲ့တယ် ။
မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ လယ်သမားရဲ့ခြံထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး လယ်သမားမွေးထားတဲ့ ဘဲတွေကို သတ်ဖြတ်စားသောက်လေ့ရှိကြတယ် ။ လယ်သမားက အဲဒါနဲ့ မုဆိုးဆီသွားပြီးအမဲလိုက်ခွေးတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ လွှတ်မထားဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် မုဆိုးဟာ နေမြဲအတိုင်းနေပြီး ခွေးတွေကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ လယ်သမားဟာ လုံးဝကိုသည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ရွာမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲဆီသွားပြီး မုဆိုးရဲ့ခွေးတွေကို အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် ။
လယ်သမားရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကြားပြီးတော့ အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြီးအကဲက အောက်ပါအတိုင်းပြောတယ် ။ “ အဲဒီမုဆိုးကို ကျုပ်က အရေးယူပေးလို့ရပါတယ် ခွေးတွေကိုလည်း ချုပ်နှောင်ထားဖို့အမိန့်ပေးလို့ရပါတယ် အဲဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခင်များမှာ မိတ်ဆွေကောင်း အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျားနဲ့အတူနေရတယ့် အိမ်နီးနားချင်းကို ရန်သူဖြစ်စေချင်သလား မိတ်ဆွေဖြစ်စေချင်ပါသလား ”
လယ်သမားက တချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ မိတ်ဆွေပဲဖြစ် စေချင်ပါတယ် ” ဖြေလိုက်တယ် ။ အဲဒီအခါ အကြီးအကဲက ဆက်ပြောတယ် ။ “ ကောင်းပါပြီဒါဆို ကျုပ်အကြံတစ်ခုပေးပါ့မယ် ဘဲတွေ မဆုံးရှုံးစေရလို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တိုးလာပါလိမ့်မယ် ”
လယ်သမားက အကြီးအကဲပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဘဲတွေထဲက အလှဆုံးဘဲ လေးကောင်ကို ရွေးပြီး မုဆိုးရဲ့သားလေးယောက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်တယ် ။ လက်ဆောင်ဘဲလေးတွေနဲ့ နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်စွာကစားနေတဲ့သားလေးယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ မုဆိုးဟာနေ့တိုင်း ၀မ်းသာကြည်နူးနေရတယ် ။ ပြီးတော့ သားလေးတွေလက်ဆောင်ရထားတဲ့ဘဲတွေကို ကိုက်စားမှာစိုးလို့ အမဲလိုက်ခွေးတွေကို သေချာ လှောင်ထားလိုက်ပါတော့တယ် ။ လယ်သမားကိုလည်း ကျေးဇူးတွေတင်ပြီး အမဲလိုက်လို့ပြန်လာတဲ့အခါ အသားတွေကို ဝေငှပေးတတ်လာပါတယ် ။ လယ်သမားကလည်း ခြံထွက်သီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဘဲဥတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ်မုဆိုးကို ပေးခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာ အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ် ။
တခါတလေ လောကကြီးမှာ ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခုတည်းကြည့်နေလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ သူတပါးကို ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရင် မိတ်ဆွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ် ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးက အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ ။ မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်ကိုလိုချင်ရင်ကိုယ့်လိုအင်ဆန္ဒတစ်ခုတည်း ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ပါနဲ့ ။ သူ့ဖက်ကိုလည်းစာနာပြီး ဦးစားပေးတတ်မှသာ ရန်သူဘ၀ကနေ မိတ်ဆွေဖြစ်သွားနိုင်တာပါ ။
သင်ရော . . ရန်သူလိုချင်တာလား မိတ်ဆွေလိုချင်တာလား ။
The farmer and the hunter အားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:35 PM
May Khin January 3, 2013 at 1:18 PM
မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်ကိုလိုချင်ရင်ကိုယ့်လိုအင်ဆန္ဒတစ်ခုတည်း ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ပါနဲ့ ။ သူ့ဖက်ကိုလည်းစာနာပြီး ဦးစားပေးတတ်မှသာ ရန်သူဘ၀ကနေ မိတ်ဆွေဖြစ်သွားနိုင်တာပါ ။
May Khin January 3, 2013 at 1:20 PM
မောင်ကံကောင်း ပျံချီ January 10, 2013 at 10:31 PM
မငုံ February 20, 2013 at 12:47 AM
ကဲ ဘလော့ဂ်အိမ်နီးချင်ကောင်းလုပ်တဲ့ မငုံလဲ အားတဲ့အချိန်လေးအပြေးအလွှား ပိုစ့်တွေ လာဖတ်သွားပါတယ်.:) .ကန္တာရမိုးစက်များကိုလဲ ပစ်ထားတာကြာနေပြီလေ။ ဒီနေ့တော့ စာတော်တော်များများဖတ်သွားပါတယ်နော့.
Doctor-Patient Relationship (သို့မဟုတ် ) ဘတ်လဘိုင်...
ကြယ်စင် ဆယ့်တစ် ထွက်ပြီ
“နယ် လွန် ”